Iibso Cunnooyinka YouTube - YTpals
Maxaad Heli Doontaa?
Dib-u-soo-celin tayo sare leh oo ka imanaya Embeds Blog
Qiimeynta Raadinta YouTube-ka ee Sare (SEO)
Caannimada Fiidiyowga Sare iyo Maamulka
Muddo Dheer, Natiijo Dheer
Fiidiyowgaagu Waa Inuu Dhex Geliyaa Awood Leh
Soo iibso Embeds YouTube si ay kaaga caawiso hagaajinta natiijooyinka raadinta fiidiyowga iyo taraafikada.
Tirada iyo tayada waxyaabaha udubdhexaadka ah ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee qiimeynta YouTube-ka ah.
YouTube wuxuu tiriyaa fiidiyoowga fiidiyoowga ah ee muuqaalka iyo awoodda fiidiyowga!
Markasta oo ay sii badato caannimadaada iyo awoodda fiidiyowgaaga, YouTube-ka sare ayaa u qiimeyn doona waana sii badin doonaan waxay ku soo bandhigi doonaan dadka kale ee daawanaya fiidiyowyada YouTube-ka.
Ma is weydiisay sida adeegani u shaqeeyo?
Markaad dalbatid adeeggan, waxaad soo gudbin doontaa fiidiyow aad rabto inaad ku dhex galno degellada kale.
Maalmaha soo socda, waxaan fiidiyowgaaga ku dhex dari doonnaa boqolaal boggag internet gaar loo leeyahay oo ah 2.0 si aad u hubiso in fiidiyowgaadu uu helayo soo-gaadhis badan. Google waxay arki doontaa fiidiyowgaaga oo ku duugan dhammaan degelladan internetka isla markiiba wuxuu tixgelinayaa fiidiyahaaga inuu noqdo mid caan ah sidaa darteedna leh awood sare.
Caankani sare iyo awoodani waxay u horseedaa YouTube-ka inay sare u qaadaan fiidiyahaaga natiijooyinkooda raadinta isla markaana si isdaba joog ah ugu muujiyaan boggooda intarnetka dadka kale ee daawanaya fiidiyowyada YouTube-ka.
Muxuu YouTube kudarsan yahay?
Weligaa ma booqatay degel ama baloog ay ku jiraan fiidiyoo YouTube ah oo lagu soo bandhigay? Taasi waa gundhig!
Haddii fiidiyowgaagu uu gundhig u yahay karti (tan waxaa u suurta galiyay asal ahaan), markaa qof kastaa wuu ku dhejin karaa fiidiyahaaga YouTube-ka websaydhkooda ama gudaha boggooda warbaahinta bulshada.
Markay tani dhacdo, waa wax fiican! Waxaad helaysaa bilaash, dhiirrigelin la'aan fiidiyowgaaga.
Waa maxay faa iidooyinka ay leedahay YouTube-ka?
Kadib markaad amarkaaga dhigato, waxaan qaadaneynaa fiidiyowga aad soo gudbisay waxaanan bilaabi doonnaa inuu kudarsamo websaydhada khuseeya.
Waxaan bilaabaynaa inaan ka shaqeyno amarro cusub 24-72 saacadood gudahood ka dib marka la dhigo. Kadib, waxay qaadan doontaa toddobaad kale in la dhammeeyo dhalmada.
Maxaa dhacaya kadib amarkayga?
Adeegani kaligiis ma ka dhigi doonaa fiidiyowgaygu inuu guuleysto?
Haa iyo maya. Adeegani wuxuu kaa caawin doonaa kordhinta qiimeyntaada YouTube-ka iyo taraafikada dabiiciga ah, laakiin inaad si guul leh u guuleysato waxay hoos u dhacdaa arrimo kala duwan tanina waa 1 ka mid ah arrimahaas.
Waxyaabaha kale ee lagu hagaajinayo guusha fiidiyowga waxaa ka mid ah:
YouTube Video SEO - ku habboonaanta cinwaankaaga fiidiyowga, sharraxaadda, meta tags, iwm waa qodob aad muhiim u ah. Nasiib wanaag, waxaan bixinnaa adeeggan! YouTube SEO
Kordhi Channelkaaga - miyaad waligaa dareentaa sida kanaalada leh macaamiisha 1M + ay u leeyihiin jawi kaladuwan oo kala duwan iyaga isla marka aad booqato? Sababtoo ah waxay wax ka beddeleen wax walba oo ku saabsan kanaalkooda si ay u noqdaan kuwa xirfad leh intii suurtagal ah. Ma isku dayeyno inaan kor u qaadno adeegyadeenna, laakiin waxaan bixinnaa adeeg qiimeyn channel ah oo runti ah mid la yaab leh oo lama huraan ah haddii aad rabto guusha dhabta ah ee YouTube. Qiimeynta Kanaalka YouTube
Banner Channel Tayada Sare iyo Thumbnail Video - Mar labaad, waxaan bixinaa adeeggan. Naqshadeynta Sawirka YouTube
Mawduuc weyn (si cad)
Eeg waxa macaamiisheenu dhahayaan markay iibsanayaan Embeds YouTube